हरेक महिला उनको शरीर सिद्ध थियो चाहन्छ। तर, यो सधैं वास्तविकता संग एकै समयमा पर्नु कामनाहरु छ। छन् धेरै किन सर्जन गर्न खोल्दै छ। यो बचाउनुभयो गरिएको र महिला निजी भागहरु छैन। आखिर, ठूलो र धेरै फैलएको लेबिया सेक्स मात्र होइन बेचैनी डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि एक महिला कठोरता को एक अर्थमा ल्याउन, zakompleksovannosti। आफ्नो निजी भागहरु सुन्दर थिए लागि, तपाईंले यस्तो Labiaplasty रूपमा सञ्चालन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यो प्रक्रिया हो कि सिक्न, त्यो के प्रकार साझेदारी के यो लागत। साथै, तिनीहरूले पहिले नै आफ्नो लेबिया को आकार र आकार समायोजित भएकाहरूलाई बालिका बारेमा के सोच्नुहुन्छ पत्ता।
Labiaplasty - एक शल्य प्रक्रिया महिला को इच्छा मा तोकिएको गर्न सकिन्छ। यस्तो हेरफेर को उद्देश्य लेबिया फेयर सेक्स को आकार र आकार ठीक छ। सञ्चालन 20 शताब्दीको 70-एँ संग थप गरेको छ। हरेक वर्ष यो प्रयोग विभिन्न कमजोरीहरू वा चोट ठीक गर्न सेक्स अंगहरु आकर्षक बनाउन सकिन्छ, साथै, लोकप्रियता प्राप्त छ।
प्रक्रिया को लागि सङ्केत गर्छ
अपरेसन "Labiaplasty" घनिष्ठ ठाउँ को उपस्थिति सुधार गर्न एक भारी इच्छा गर्नेहरूलाई महिलाहरु रुचि हुन सक्छ। तर आफ्नो शरीर यो dissatisfaction यौन सम्बन्ध असर गर्न सक्छ।
तर सौंदर्य आकर्षक, ठूलो लेबिया बाहेक एक महिला असहज ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, निष्पक्ष सेक्स लुगा लगाएका गर्दा विशेष गरी अंडरवियर घर्षण को गुनासो सक्छ। महिला पनि microtrauma उत्पन्न हुन सक्छ। यस मामला मा, डाक्टर साँच्चै यी अप्रिय लक्षण उन्मुक्ति गर्न सर्जरी गर्न सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी, Labiaplasty लागि सङ्केत गर्छ छलफल गर्न सकिन्छ:
- स्वच्छ हेरविचार को समस्या।
- यौन जीवनमा बेचैनी।
- Dissatisfaction उपस्थिति घनिष्ठ क्षेत्र (जस्तै, अत्यधिक मूल्य, विषमता, आदि ...)।
- यो लेबिया गर्न चोट।
- द मनोवैज्ञानिक कारक।
को लेबिया minora परिवर्तन।
प्लास्टिक लेबिया majora।
पहिलो मामला मा, स्थानीय वा सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत डाक्टर Labiaplasty भनिन्छ प्रक्रिया वहन। टाँका को लेबिया majora को भित्र बनाइएका छन्, तिनीहरूले हिड्ने गर्दा बेचैनी ल्याउन छैन। यो सञ्चालनको अवधि लगभग आधा घण्टा छ।
तपाईं लेबिया minora को लेजर सुधार आकार भने, त्यसपछि प्रक्रिया स्थानीय शरिरका कुनै भाग बेहोस बनाउन दिइने औषधि अन्तर्गत गरिन्छ। अवधि manipulations 10 मिनेट, को sutures आयातित गर्न आवश्यक छैन। लेजर उपचार संग अवधि पुनर्वास मात्र 1 दिन छ।
तपाईं लेबिया majora को प्लास्टिक पकड गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यो बोसो redistribution को मद्दतले गरेको छ। कमी Liposuction द्वारा बाहिर छ। डाक्टर छाला मा सानो punctures मार्फत बोसो हटाउँदछ।
एक महिलाले लेबिया majora (आफ्नो sagging) को वर्तमान विरूपण छ भने, त्यसपछि छाला डाक्टर surgically हटाउन सक्छ।
Labiaplasty दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ:
गैर-शल्य। एक महिलाले लेबिया एक मामूली drooping भएको छ जब सञ्चालन गरिन्छ। यो विधि को सार कोलैजेन को उत्पादन बढाउने छ। यो उद्देश्य लागि, डाक्टर इलेक्ट्रोड फरक चुच्चो प्रयोग गर्दछ, वाहक radiowave र कोलैजेन फाइबर प्रभावित चार्ज। फलस्वरूप, लेबिया को लम्बाइ घट्छ र ठाउँ मा छाला दृढ र taut बन्नेछ।
परम्परागत। सुधार यस प्रकारको भन्दा साधारण छ। सर्जन हेरफेर अवधिमा स्केलपेल वा लेजर संग अतिरिक्त ऊतक हटाउँदछ।
महिला यो शरीर निम्न समस्या वा सुविधाहरू छ भने अनुमति हुनेछैन लेबिया कम:
कुनै पनि स्थानीयकरण को घातक ट्यूमर।
somatic रोगबाट को वृद्घि।
यौन रोग प्रसारित।
गरिब रगत clotting।
संक्रमण भन्ने तीव्र चरण छन्।
एचआईभी लागि सकारात्मक परीक्षण।
यो सर्जरी पछि जन्म दिन सम्भव छ?
त्यसपछि dared गर्ने धेरै महिला प्रश्न मा रुचि को लेबिया, को सुधार पूरा गर्न: "? यो सम्भव Labiaplasty जस्ता शल्य चिकित्सा प्रक्रियाहरु पछि आमा बन्न छ"। सर्जरी पछि, तुरुन्तै, को पाठ्यक्रम, यो आवश्यक छैन यस सन्दर्भमा पतिले काम गर्न छ। एक समय को लागि, महिला अवधारणा अघि हुने छैन। तर कडाई सञ्चालन सञ्चालन पनि यदि यस्तो सुधार जन्म नहर को लोच असर पार्ने छैन। त्यसैले, यो महिला Labiaplasty पछि तिनीहरूले एक बच्चा हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई चिन्ता गर्न लागि आवश्यक छ। तिनीहरूले सफल हुनेछ किनभने त्यस्तो सञ्चालन कुनै पनि मामला मा छ छैन शारीरिक प्रसब लागि contraindication छ।
सर्जरी लागि तयारी
मास्को यो प्लास्टिक सर्जरी वा अर्को शहर आवश्यक केही संगठन आवश्यक पर्दछ। त्यसैले, सञ्चालन गर्नु अघि महिला आवश्यक, एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ द्वारा जांच गर्न एचआईभी, रगत र मूत्र को सामान्य विश्लेषण लागि hepatitis बी र सी, सिफलिस, वनस्पति मा pelvic धब्बा, रगत लागि परीक्षण गर्न आवश्यक छ। साथै, आयोजित गरिनेछ जो क्लिनिक, मा लेजर Labiaplasty आवश्यक भविष्य विरामीहरु को समग्र स्वास्थ्य बारेमा चिकित्सक देखि प्रमाणपत्र चाहिन्छ।
सर्जरी अघि, महिला यी बुँदाहरू पालन गर्नुपर्छ:
लागूपदार्थ, जो वृद्धि रक्तस्राव हुन सक्छ प्रयोग रोक्नुहोस्। यी गैर-steroidal विरोधी भडकाऊ दबाइहरु, साथै "एस्पिरिन" समावेश गर्नुहोस्। भिटामिन ई, हरियो चिया, ओमेगा3फैटी एसिड: र पनि बोट मूल को आक्रान्त लागूपदार्थ वृद्धि। त्यसैले पनि तिनीहरूलाई देखि समय बन्द लिनु आवश्यक छ।
1 पूर्व सर्जरी गर्न दिनको लागि यौन सहवास बच्न महत्त्वपूर्ण।
प्रक्रिया पछि Prohibitions
प्लास्टिक सर्जरी (मास्को र अन्य शहर र पनि देशहरूमा) गरेको छ, एक महिला यस्तो निर्धारण पालन गर्न भविष्यमा महत्त्वपूर्ण छ:
- यो सौना, स्टीम कोठा, धूपघडी2हप्ता सर्जरी पछि प्रयोग नगर्नुहोस्।
- खेल भाग नगर्नुहोस्।
- एक Thông लगाउने नगर्नुहोस्।
- tampons प्रयोग नगर्नुहोस्, पैड मात्र।
- शौचालय प्रत्येक यात्रा घाउ निको र घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने मलम प्रयोग घाउ को किनाराको प्रक्रिया आवश्यक पछि।
- यो Labiaplasty रूपमा यस्तो प्रक्रिया पछि एन्टिबायोटिक, डाक्टर भेटघाट, पुनर्वास को अवधिमा लिन आवश्यक छ।
- यौन गतिविधिबाट (अघि कम्तिमा 1 दिन र2हप्ता को हेरफेर पछि) नगर्न गर्नुपर्छ अघि र सर्जरी पछि।
को लेबिया को उचित हेरविचार संग घाउ निको 10 दिन भित्र हुन्छ। सञ्चालन गरेपछि महिला उहाँले देख्यो भनेर, डाक्टर एक यात्रा को लागि निश्चित आउनु पर्छ एक हप्ता, सबै कुरा रोगी संग क्रममा थियो।
Labiaplasty, पहिले र जो पछि एक महिला चिन्तित अक्सर कुनै पनि समस्या ल्याउन गर्दैन महसुस हुन सक्छ। तर सञ्चालन एउटा अयोग्य डाक्टर वा विशेषज्ञ रोगी वास्तै सिफारिसहरू छ भने, जटिलताहरू अझै पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले, तुरुन्तै सर्जरी पछि दुर्लभ छ, तर अझै पनि जस्तै समस्या को एक संभावना छ:
- अप्रिय sensations लेबिया फिर्ता लिइयो।
- बेचैनी गर्दा हिड्ने वा अंडरवियर लगाएका।
- Labiaplasty को क्षेत्र मा छाला को कम संवेदनशीलता।
- भविष्यमा यो discontinuities को वंश प्रक्रिया चलिरहेको बेला ऊतक निशान हुन सक्छ।
Labiaplasty गर्न, एक महिला धेरै फरक महसुस हुनेछ अघि र कुन पछि, सफल, कुनै नकारात्मक प्रभाव र जटिलताहरू संग, तपाईं consciously क्लिनिक को चयन दृष्टिकोण हुनुपर्छ थियो। तपाईं आफ्नो गतिविधिहरु, नवीनतम उपकरण र योग्य कर्मियों पूरा गर्न लाइसेन्स छ कि एक स्वास्थ्य हेरविचार सुविधा खोज्न आवश्यक छ। तपाईं पनि पत्ता लगाउन के मानिसहरूले यसलाई विचार, यस्तो संगठन को समीक्षा खोज्नुपर्छ, सायद कसैले लेबिया Labiaplasty को आचरण सम्बन्धित अनुभव तपाईंले साझेदारी हुनेछ। यो दक्ष र गम्भीर अन्त परिणाम निर्भर हुनेछ मा यस कारण, एक संस्थाले यस्तो चयन गर्न दृष्टिकोण हुनुपर्छ।
Labiaplasty: कारोबार मूल्य
यो सर्जरी को लागत यसको कार्यान्वयनको विधि, साथै क्लिनिक को प्रतिष्ठा मा निर्भर गर्दछ। प्रक्रिया को मूल्य देखि 15 हजार 80 rubles दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ, सञ्चालन मास्को क्लीनिक मा लेबिया minora 70 हजार rubles खर्च गर्न सक्छन् कम गर्न। Labiaplasty, जो को मूल्य 80 हजार rubles हुन सक्छ, यो लेबिया majora को कमी मा एक पकड हेरफेर अक्सर छ। केही क्लिनिक मा, यस्तो सञ्चालन जटिलता को भागमा विभाजन गरिएको छ। उदाहरणका लागि, जटिलता (एक लेबिया को सुधार) को Labiaplasty 1 श्रेणी 20 40 हजार rubles देखि खर्च गर्न सक्छन्। प्लास्टिक सर्जरी श्रेणी2(सम्पादन लेबिया majora दुवै) 50 देखि 70 हजार गर्न खर्च हुनेछ। तर तत्काल सर्जरी बाहेक थप भुक्तानी र प्रारम्भिक परीक्षा को लागि आवश्यक छ। आखिर, परामर्श, परीक्षा को लागि, विभिन्न परीक्षण पनि एक सभ्य राशि दिन छ। केवल कार्यका लागि पूर्व-डिप्लोयमेन्ट प्रशिक्षण मा 10 हजार rubles राख्नु आवश्यक छ।
मान्छे देखि सकारात्मक प्रतिक्रिया
यस्तो कार्यका Labiaplasty रूपमा, प्रतिक्रियाहरू सबैभन्दा भाग सकारात्मक लागि प्राप्त। यस्तो सर्जरी अनुभव भएकाहरूलाई बालिका र महिला, महिला फोरम एक किसिम मा आफ्नो अनुभव साझेदारी गर्न उत्सुक हुन्छन्। तिनीहरूले सहनशीलता को एक अर्थमा गुमाएका सञ्चालन गरेपछि तिनीहरूले थप, ओछ्यानमा unfettered उनको शरीर अब लज्जित भएका छन् भनेर याद गर्नुहोस्। साथै, अब तिनीहरूले धेरै हिंड्न सहज गरे, केही कहीं, अघि द्वारा हस्तान्तरण गरिएको थिएन मालिश। फेयर सेक्स को ध्यान आकर्षित जो मुख्य कुरा हो - कि तपाईं योग्य डाक्टर कुनै पैसा र पहुँच छोडूँगा गर्न आवश्यक के।
महिला बाट नकारात्मक प्रतिक्रिया
दुर्भाग्यवश, Labiaplasty समीक्षा र नकारात्मक चरित्र छ। केही महिला मा एक यस्तो सञ्चालन संग दुखी छन् को लेबिया को कमी। त्यसैले, त्यहाँ पछि Labiaplasty पनि अधिक लुगा RUB गर्न सुरु, हिंड्न पनि गाह्रो बन्न लेख्ने जो बालिका देखि प्रतिक्रिया छ। केही महिला पनि lovemaking लेबिया समयमा भयानक बेचैनी र पनि दुखाइ ल्याउन, शुष्क रहने भन्छन्। त्यसपछि बारेमा कुनै पनि सेक्स कुनै प्रश्न हुन सक्छ। यस्तो नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू अक्सर ती महिला छैनन् विशेषज्ञहरु प्राप्त गर्न पर्याप्त भाग्यवान् गर्ने बाँकी छन्। सायद सञ्चालन तिनीहरूले उचित उपकरण बिना बाहिर केही अभ्यास सर्जन लगे। जो कोहीले भयो होइन यस्तो अप्रिय परिणाम जोगिन, यो क्लिनिक को विकल्प संग हतार छैन, र खोजी गर्न यो तपाईं साँच्चै विश्वास गर्न सक्ने छ आवश्यक छ।
यस लेखमा, तपाईं Labiaplasty, पहिले जस्तो यो प्रक्रिया बारे धेरै सिकेका र जो पछि तपाईं आफ्नो घनिष्ठ अंगहरु ट्रयाक राख्न चाहन्छु। हामी यस्तो सञ्चालन निर्णय गर्नु अघि, यो एक साँच्चै योग्य डाक्टर र एक राम्रो क्लिनिक, एक उच्च स्तर हेरफेर पकड हुनेछ जो फेला पार्न आवश्यक छ भनेर बुझे।
Tarasova Irina। जीत इच्छा
प्रजनन - यो के हो? बोट र जनावरहरूको प्रजनन
दूध संग बन्स मा आटा (खमीर): व्यञ्जनहरु
बियर सस मा बीफ - vkusnota indescribable! रहस्य र नुस्खा